Horror – SoShwe
ထိတ်လန့်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် ရယ်မောအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းများ။ (Trailer နဲ့တကွ)
ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေတဲ့ကြားက ရယ်မောစေမယ့် အခိုက်အတန့်မျိုးတွေ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးကို ကြည့်ရှုခံစားချင်တဲ့ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ The Final Girls – ဟောင်းနေပေမယ့် ဆန်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း။ ၂။ The Babysitter – ကလေးထိန်းမမကိုသဘောကျသွားတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို ကလေးထိန်းမမက သတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဒီကလေးငယ်လေးက ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားမလဲ။ ၃။ Life After Beth – သေရာကနေ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးဟာ ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရသောအခါ။ သတ်လိုက်မှာလား? ဒါမှမဟုတ် အတူရှင်တွဲ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလဲ? ၄။ …
ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသရဲအိမ်ရဲ့ အဆုံးထိဝင်ရောက်ပြီး ဒေါ်လာ ၂သောင်း ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါသလား? ? ?
ကျွန်မတို့တော်တော်များများဟာ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့တင် ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အတွေးမျိုးစုံဝင်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး အပန်းဖြေဥယျာဉ်တွေကို အလည်အပတ်သွားရောက်တဲ့အခါမှာလည်း သရဲအိမ်ထဲကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူဝင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ Summertown ဒေသနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Tennessee ဒေသမှာရှိတဲ့ သရဲအိမ်တစ်အိမ်ဟာဆိုရင် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခြောက်လန့်နည်းတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အဆိုပါသရဲအိမ်ထဲကို ဝင်ကြတဲ့သူတိုင်းက အဆုံးထိမဝင်နိုင်ဘဲ လမ်းတစ်ဝက်ကနေ ပြန်လည်ထွက်ပြေးလာခဲ့တာမျိုးတွေရှေိတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ်သရဲအိမ်ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Russ McKamey က သူတီထွင်ထားတဲ့ ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ သရဲအိမ်ကို “Mind Game” လို့ အမည်ပေးထားပြီး ထိုသရဲအိမ်ထဲကို အဆုံးထိဝင်နိုင်တဲ့သူကို ယူရိုဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀) ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၂သောင်းဆိုတာ …